Ukungalali, nguDaniel Martín Serrano. Uphengululo | Uncwadi lwangoku
Ukungalali, nguDaniel Martín Serrano. Uphononongo
UMariola Diaz-Cano Arevalo | 07/10/2021 12:00 | Ababhali, Iincwadi, Inoveli emnyama, Ezahlukeneyo
Insomnio yinoveli yokuqala eyedwa ngo UDaniel Martin Serrano, Kodwa le Madrilenian inezinto ezininzi ezingeyonyani ezisemva kwakhe ezinomsebenzi weminyaka engamashumi amabini uthotho lombhali njengaye Isibhedlele esiPhakathi, Velvet, El Príncipe o Iilwandle eziphakamileyo. Ufundisa iSkripthi seTelevishini kwiSikolo seFilimu saseMadrid kwaye ngoku uzazise ngesi sihloko sohlobo olumnyama esiphumelela ngokubanzi phakathi kwabafundi nabagxeki. KUNYE ukwenzela mna bekuye enye yeencwadi zalo nyaka. Le yeyam kuhlolwa leyo, ngethamsanqa, ndakwazi ukwabelana nomlobi kumdlalo wokugqibela weNcwadi yaseMadrid.
1 Ukungalali - Ubume
1.1 UThomas Abad
1.2 Amaxesha amabini
1.4 A kodwa
Owayesakuba nguMhloli uTomás Abad unengxaki kulala ezingapheliyo kwaye, ngaphezu koko, eyoyikisayo. Kwaye xa ufika kwiphepha lokugqibela kwinoveli, nawe ucinga ukuba ubambe ukudinwa kunye nokukhathazeka kwakhe. Ukongeza, ukubaliswa kwembali yayo akukunikanga kuphumla, kwaye linqanaba le uxinzelelo nobumnyama lowo uphatheka kabuhlungu okwangoku nokwexesha lakhe elidlulileyo oko uyabulela ngoncedo lokuphumla kwabo, Nangona kunjalo.
Inyani yile yokuba uTomás yayihamba kakuhle emapoliseni, waye umsebenzi ogqwesileyo neqela elisebenzayo elijikelezileyo kunye nelalo ubomi bomntu Isebenzile nayo, ngomtshato othuleyo kodwa nonyana awambonayo ngenxa yalomsebenzi uthathayo. Kodwa oko msebenzi iba ithatha ingqalelo xa ziqala ukuvela Imizimba emincinci etyhidiweyo eya kuthi ifumbe iphazili enkulu.
Emva koko fumanisa ukuba ikhona umntu osondele kakhulu kuye lowo ukhona ubandakanyekile kwaye kubonakala ngathi kunetyala. Iya kuba yimpazamo yakho, kuba isigqibo esibi into ethatha ukumkhusela iya kuba ngunobangela wakhe ukugxothwa, ukukhutshwa kunye nokugatywa luluntu oluninzi. Ukusuka apho ukuya ezantsi esihogweni eveliswa kukungalali, Cwepa kunye nokutyeba ngakumbi xa, okwangoku, ngelixa uzama ukuphila nayo umkhekheli wokhuselo ubusuku kwi yokupaka kwaye emva koko enkulu amangcwaba de la Almudena, umntu othile wenza ukuba uyazi ukuba amaphupha amabi awapheli.
Enye ye ukubetha kwinoveli kukusenza sihambe amaxesha amabini okubalisa ezibonisiweyo kwi ukusetyenziswa kolwimi ngoku Okwangoku— nakwixesha elidlulileyo -Ukusixelela okwenzekileyo kunye nendlela esifikelele ngayo kweso sipho. Inqaku lelokuba ibali elinye, okanye zombini, zihamba ngokuhambelana ne ixesha ilinganiswe ngokugqibeleleyo kangangokuba ibonisa i urhwebo olungathandabuzekiyo zombhali njengombhali wescreen. Kwaye iyenza kakuhle kangangokuba nakubafundi abayithandi ncam le ngxelo ikhoyo, njengoko kunjalo kwimeko yam, ayikhamisi kwaphela.
Bayanceda iingxoxo ezilungileyo kunye nerosari yabalinganiswa yesibini tan yakhiwe kakuhle njengomntu ophambili. UTomás uza kuphinda afumane abanye babo, abaza kuzama ukumnceda, njengeqabane lakhe lakudala, kwaye baya kufumana amahlakani amatsha. Kodwa akukho mntu uya kuba nakho ukuthintela ubomi bakhe ukuba butshone ngakumbi nangakumbi, aphulukane nosapho kwaye aphantse aphulukane nengqondo.
Elinye inqaku elomeleleyo yile useto ke ngokuhambelana nobumnyama, ithoni yesiporho kwaye iphantse yahlala ithoni yasebusuku kwi Madrid kunqabile ukuba kuchazwe ngabaninzi ubumnyama. Ukongeza, iindawo zokupaka kunye namangcwaba zikhuthaza ngakumbi oku ukuziva bengeyonyani loo Abad unayo. Ufuna ukusombulula ityala kunye nokulala, kuba unelungelo lokucamagushela ityala elikhulu elimngcungcuthekisayo ngenxa yokuphuthelwa.
Nangona uyibeka kwaye unesihlobo kakhulu okanye, ubuncinci, yeyam, masithi ngokungagqibekanga kobungcali njengesiqinisekiso sokufunda kuqala emva koko njengomfundi: Imihlathi inde kakhulu, ezininzi kwiphepha elinye. Kodwa bekutshiwo, itempo ebalisayo iyaphumelela kangangokuba bayaxolelana.
Ukuba uDaniel Martín Serrano akakwazanga ukwenza ukuba ityala lakhe libe ngcono kwingxelo, evela kuhlobo olwahlukileyo, olutshintshayo nolukhawulezayo njengombhalo. Ibali elilungileyo, ulwakhiwo olulungileyo kunye nesiphelo njengoko kuchazwa yimigaqo kwaye oko kukushiya unencasa edlalwa rhoqo kolu hlobo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » Ukungalali, nguDaniel Martín Serrano. Uphononongo
URamón Gómez de la Serna
Iincwadi ezikhuthazwayo zokuwa